यी हुन् कोरोना उपचारमा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने विश्वका ५ महिलामा छनौट भएकी डा. रुना झा – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/यी हुन् कोरोना उपचारमा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने विश्वका ५ महिलामा छनौट भएकी डा. रुना झा
काठमाडौं । कोरोना भाइरस ९ कोभिड १९ ० को उपचारमा सक्रियरुपमा अग्रपंक्तिमा देखिएका पाँच महिलाको सूचीमा केन्द्रीय प्रयोगशालाकी निर्देशक डा रुना झा पनि छनोटमा पर्न सफल भएकी छन् ।
युएन ओमनले कोरोना भाइरसको अग्रपंक्तिमा खटिइरहेका विश्वका पाँच महिलाको सूची अन्तर्गत जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डा। रुना झालाई समावेश गरेका छन् ।
कोरोना भाइरसले विश्व समुदायलाई त्र,सित बनाइरहेको छ । २ लाख बढिले ज्या,न गु,माइसकेका छन् भने ३४ लाख बढी सं,क्रमित छन् । यसको न्यूनीकरण र सं,क्रमितको उपचारमा विश्वभर लाखौं चिकित्सक खटिएका छन् । अहिलेको समयमा घर, परिवार र भाइरसको जोखिमको परवाह नगरिकन खटिएका चिकित्सकबाट झण्डै २ लाख निको भएर घर फर्किसकेका छन् ।
त्रास यतिसम्म छ कि सामान्यतया स्वास्थ्यकर्मी पनि सं,क्रमित व्यक्तिको उपचार गर्न त्यति सहजै तयार हुन सक्ने हिम्मत गर्दैनन् । चीनमा कोरोनाकै कारण स्वास्थ्यकर्मीको नि,धन समेत भएको खबर सार्वजनिक भएको थियो । कुनै पनि व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको सं,क्रमण छ कि छैन भनेर स्वास्थ्यकर्मीले प्रयोगशाला (ल्याब) मा ती व्यक्तिबाट संकलित नमूना परीक्षण गर्नुपर्छ ।
साढे ४ वर्षअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निजामती सेवाको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर ११ औं तहमा नियुक्त भएकी थिइन् उनी । विगत १० महिनादेखि उनी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको निर्देशक पदमा कार्यरत रहेर संस्थाको ‘हाकिम’को भूमिका सम्हालिरहेकी छन् । उत्कृष्ट पाँचमा पर्ने अन्य महिलामा संयुक्त राष्ट्रसंघका फिल्ड एसिसटेन्टद्वय अमल अल महायरा र और हादेल दा,बिबेह छन् । उनीहरु जोर्डनमा कार्यरत छन् ।
दुवैजना जोर्डनका सं,क्रमित महिला र सिरियाका शरणार्थीहरुको सेवामा सक्रिय छन् । यस्तै सूचीमा पर्ने अर्की महिला चीनकी यान सेंगलियान हुन् । उनी चीनको ग्रामीण क्षेत्रमा रहेर स्वास्थ्योपचारमा संलग्न छिन् ।
नेपालीहरुका लागि आयो फेरि अर्को दुखद खबर, यस्तो डरलाग्दो पुष्टि भएपछि देशैभर तरंग